Ingabe kuhle ukulindela okungaphezulu kakhulu kwezingane? | Bezzia
Ingabe kuhle ukulindela okungaphezulu kakhulu kwezingane?
UMaria Jose Roldan | 17/09/2021 22:21 | Fundisa izingane
Bonke abazali bayavuma lapho bekhombisa lokho ukukhulisa nokufundisa inganeAkuwona umsebenzi olula futhi udinga ukubekezela nokubekezela okukhulu. Ingqondo yengane iyakhula futhi kungumsebenzi wabazali ukuthola ingane kancane kancane, ukuthi ikwazi ukwenza izinto ezihlukene ezisisiza ukuba ibe nokuzimela okuthile.
Kufanele wazi ukuthi ungabekezela kanjani futhi ungalindeli ukuthi ingane yakho izofunda izinto okokuqala ngqa. Abazali abaningi bavame ukuhlangabezana nenkinga enjalo futhi ngukuthi okulindelwe kwabo kuphakeme kakhulu kunalokho okuyikho ngempela. Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma nawe uma kukuhle ukudala uchungechunge lwezinto ezilindelwe yizingane.
1 Ukubaluleka kokuhlonipha ubuntwana
2 Izingane ziyizingane nje
Ukubaluleka kokuhlonipha ubuntwana
Akekho umuntu ozalwa azi futhi yingakho izingane zidinga usizo lwabazali bazo uma kuziwa ekufundeni izinto ezithile nokuthi ukukhula kwengqondo yazo kube okungcono kakhulu. Izingane kufanele ziholwe ngaso sonke isikhathi ngabazali bazo uma kuziwa ekufundeni futhi ziqinisekise ukuthi eminyakeni edlule, zifunda ukuzimela nokuzimela. Izingane ziyizingane futhi abazali abanakulindela ukuthi okokuqala lapho beguquka, bazokwazi ukukhuluma nokukhulumisana nabanye. Ubuntwana inqubo ende edinga ukubekezela okukhulu kubazali, ngoba akuyona yonke into efundwa ngosuku olulodwa.
Akungabazeki ukuthi ukuba ngumzali kungakhathaza kakhulu abazali, kepha lesi akusona isiqongo sokuthi omncane abekwe ezingeni lokuqhubeka lokufunwa. Ngaphandle kokukhathala, abazali kufanele babekezele ngaso sonke isikhathi nezingane zabo futhi balandele imihlahlandlela edingekayo maqondana nentuthuko nokufunda.
Izingane ziyizingane nje
Ayikho into ezuzisa futhi iduduze abazali njengokubuka ingane yabo ifunda izinto ezintsha usuku nosuku. Ukwazi ukubona ukuthi ingane ikhula kanjani futhi kancane kancane iba nokuzimela kuyinto enhle impela kunoma yimuphi umzali. Kujwayelekile impela ukuthi izingane zenze amaphutha kaningi kuze kube yilapho zifunda izinto. Kuyinto engokwemvelo futhi ezuzwe kumuntu hhayi ngenxa yalesi sizathu, abazali kufanele badele noma balahlekelwe ukubekezela.
Izingane ziyizingane nje futhi ngenxa yalokho kufanele ziziphathe ziyikho. Abazali kumele babeke eceleni okulindelwe okwenziwe futhi bajabulele ubuntwana bezingane zabo. Eminyakeni edlule, izingane zizokhula futhi inqubo yazo yokufunda nokuthuthuka izoqhubeka nokuncika ngokwazo.
Ngamafuphi, abazali abaningi namuhla benza iphutha elikhulu lokudala okulindelwe ezinganeni zabo, ekugcineni okungafinyelelwa kuzo ngokugcwele. Ukufunda kuyinkqubo ende edinga ukubekezela okukhulu kubazali. Izingane kufanele zivunyelwe ukuthi zifunde izinto ngejubane lazo ngaphandle kokuzwa isidingo kubazali bazo. Ubuntwana yisigaba esihle kakhulu sempilo, izingane nabazali okufanele basithokozele ngokugcwele.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Fundisa izingane » Ingabe kuhle ukulindela okungaphezulu kakhulu kwezingane?
I-Upcycling: imibono emi-3 yokwenza kabusha izingubo ezindala
Sebenzisa ama-patchwork ekhaya